Android ဖုန်း အတွက် App (30)
easy music radio ရဲ့ website ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကိုအားပေးနားသောတဆင်တဲ့ ပရိတ်သတ်အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...
လင်းယုန်ဖြူလေး | 04:47 | ကဗျာ
အလွမ်းတံခါးကို ထ ပိတ်လိုက်တယ်...
သူ မမေ့နိုင်ပါဘူးတဲ့ ...
နံရံပေါ်က စက္ကန့်သံ ခြောက်ကပ်ကပ်က
အားပေးရှာပါတယ်.. အချိန်က ကုစားသွားမှာပါတဲ့
ဦးနှောက်က ရှုတည်တည်နဲ့ ၀င်ဟောက်တယ်
ငါ့ memoryဆိုတာ သေဆုံးဖို့ခက်တယ်ဟ တဲ့ ။
ကျမ အသည်းလေး မျက်နှာငယ်ရှာတယ်
သူသည်လည်း ဒါဏ်ရာ ဗရပွ နဲ့လေ ..
ခံစားချက်တချို့က .. ရေဓါတ် ၁%လောက်နဲ့ပေါင်းပြီး
ငါတို့ ... ရာခိုင်နှုန်းပြည့်
အရမ်းချစ်ခဲ့တာပါတဲ့ ...။ ...... ။
Posted by လင်းယုန်ဖြူလေး at 04:470comments
chityin htoo | 13:09 |
အေဒီ (၁၁) ရာစုတွင် သုဝဏ္ဏဘူမိ ခေါ် သထုံပြည်ကြီးကို ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်းကြီးက တိုက်ခိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွန်တို့မှာ တစ်ထီးတစ်နန်း နေထိုင်နိုင်သည့် အဆင့်မှ လျောကျခဲ့ရသည်။ ထို့အတူပြင် ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ မွန်တို့မှာလည်း မြောက်ဖက်မှ အလုံးအရင်း ဆင်းသက်လာကြသည့် ရှမ်း-ထိုင်း(တိုင်)အနွယ်တို့၏ နယ်ချဲ့မှုကို ခံရပြီး အေဒီ (၁၂) ရာစုအတွင်းတွင် အပြီးတိုင် ပြိုလဲရပြန်သည်။ ထိုနောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မွန်တို့မှာ ပုဂံလက်အောက်ခံ ဘ၀ရောက်နေရာမှ ပုဂံအင်အားကျဆင်းချိန်၊ မွန်ဂိုတာတာ တို့၏ ရန်ကြောင့် ပုဂံ ပျက်ချိန်များတွင် ကိုယ်ပိုင်ထီးနန်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းရာမှ မဂဒူး မင်းဆက် ပေါ်ထွန်းလာသည်။ မဂဒူး မင်းဆက်ကို ဗညားဝါရူး (ခေါ်) ၀ါရီရူးမင်းက မုတ္တမမြို့မှ စတင်တည်ထောင်သည်။ ထိုမင်း၏ ငယ်အမည် မဂဒူး ကိုအစွဲပြုကာ ၄င်းတည်ထောင်သည့် မင်းဆက်ကို မဂဒူးမင်းဆက်ဟုလည်းကောင်း၊ ဘွဲ့နာမည်ကို အစွဲပြုကာ ၀ါရီရူးမင်းဆက် ဟုလည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ မဂဒူးမင်းဆက်တွင် မင်းပေါင်း ၁၈ ဆက်တိတိမင်းပြုကြသည်။ မင်းဆက်(၇)ဆက်ထိ မူလဖြစ်သည့် မုတ္တမမြို့တွင်သာ အစဉ်အဆက် မင်းပြုကာထီးနန်း စိုးစံခဲ့သော်လည်း (၈) ဆက်မြှောက်ဖြစ်သည့် ဆင်ဖြူရှင်ဗညားဦး(သုရှင်ဗညားဦး)လက်ထက်အရောက်တွင် လက်အောက်ခံမြို့စားများဖြစ်သည့် လောက်ဖျား၊ဥလို၊အဲဗြပန်ု နှင့် ဗြတ်ထဗ တို့ညီနောင်များကပုန်ကန်သည့်အတွက် မုတ္တမ မှ ဒုန်ဝန်း(ယခု ၀န်မြို့)သို့ပြောင်းရွှေ့စိုးစံရသည်။ သို့သော် ၀န်မြို့တွင်လည်း အချိန်များစွာမကြာလိုက်ပဲ စစ်ရှူံးပြန်သဖြင့် ဟံသာဝတီ(ပဲခူး)သို့ ပြောင်းရွှေ့ရပြန်သည်။ ထိုဆင်ဖြူရှင်ဗညားဦးနောက် နန်းတက်သည့် ဗညားနွဲ့ (ခေါ်) ရာဇာဓိရာဇ် လက်ထက်တွင် မဂဒူးမင်းဆက်၏ အထွန်းတောက်ဆုံး အချိန်ဖြစ်သကဲ့သို့ မွန်တို့အင်အား ကြီးမားလာခဲ့သည်။ရာဇာဓိရာဇ် ထိုစဉ်က အင်းဝတွင် ထီးနန်းစိုးစံကြသည့် မင်းကြီးစွာစော်ကဲ ၊ ၄င်း၏သားတော်များ ဖြစ်သည့် ဆင်ဖြူရှင် နှင့် မင်းခေါင်တို့နှင့် စစ်ပြိုင်ပြုကာ ရာဇ၀င်တွင် ထင်ရှားလှသည့် အင်းဝ-ဟံသာဝတီ အနှစ်လေးဆယ်စစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၈ ဆက်မြှောက်ဖြစ်သည့် သုရှင်တကာရွတ်ပိမင်း လက်ထက်အရောက်တွင်မူ တောင်ငူမှ အင်အားကြီးမားလာသည့် တပင်ရွှေထီး၏ အင်အားကိုမခံနိုင်ပဲကျဆုံးကာ မွန်တို့၏ မဂဒူးမင်းဆက်လည်း ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ရသည်။
မဂဒူးမင်းဆက် ၁၈ ဆက်
သို့ဖြင့် တပင်ရွှေထီး၊ဘုရင့်နောင် တို့ဟံသာဝတီကို အောင်နိုင်ပြီး ဟံသာဝတီမှတစ်ဆင့် ဒုတိယပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ကြချိန်တွင်လည်း တောင်ငူတွင် ယုံကြည်လောက်သည့် အဆွေအမျိုးများကို ဘုရင်ခံအဖြစ် ခန့်ထားတာတွေရှိကြပါတယ်။
Posted by chityin htoo at 13:090comments
chityin htoo | 16:17 |
ဖက်ရှင်ချစ်သူများကို သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်/အတုနဲ့အစစ် ခွဲခြားနည်း
ကျွန်တော်တို့ဟာ သာမန်ရွှေဆိုင်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့
ကျောက် အနီအပြာ ရောင်စုံလေးတွေကို . .
သဘာဝကျောက်လိုလို ထင်မှတ်ဖူးကြပါတယ် ။
တကယ်တမ်းမှာတော့ . . . အများအားဖြင့်တွေ့ မြင်
ချက်ကျောက်လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ကျောက်အတု
ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိတဲ့ ကျောက်အတုတွေ ကြားကနေ သဘာဝ
ကျောက်မျက် ရတနာအစစ်ကို ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ 
အချက်အလက်တွေ သိရှိထားဖို့လိုပါပြီ ။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ထွက်တဲ့ သယံဇာတဖြစ်တဲ့ သဘာဝတွင်းထွက်မိုးကုတ် ပတ္တမြား နဲ့ နီလာ ဟာ ဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းလွန်းလို့ ရှားပါး လွန်းလို့ နာမည်ရနေတဲ့ တန်းဝင်ကျောက်တွေပါ ။
တွေ့ နေမြင်နေကျ. . .ချက်ကျောက် (သို့မဟုတ်) အပူပေး / အရောင်ပြောင်း / ဆေးသွင်း ထားတဲ့ Imitation တွေထဲကနေ
သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက် အစစ်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ 
အတုနဲ့အစစ် ကွာခြားချက် တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
(1) ကျောက်အမျိုးမျိုးကိုအစစ်လို့ ထင်ရလောက်အောင်
ချက်လုပ်/ဖန်တီး ရောင်းချနေကြပြီ မို့ . . .
အတု နဲ့အစစ် ခွဲခြား သိနိုင်ဖို့အချက်အလက်တချို့ ကတော့ . .
ကျောက်အတု / ချက်ကျောက် ဟူသမျှက
သဘာဝတွင်းထွက် မဟုတ်ပဲ. . . အပူဓါတ်နဲ့ ချက်လုပ်ကြရတာကြောင့်. . .
ကျောက်တစ်ခုလုံးမှာ ပူဖောင်း (သို့မဟုတ်) အမြုပ်လို့ ခေါ်တဲ့
Gas Bubble လေးတွေ ပြည့်နှက်နေတတ်ပါတယ် ။
ကျောက်ကြည့် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်မှ မြင်ရမှာပါ ။
သာမန်အတိုင်း ကြည့်ရင်တော့ . . .အရောင်အသွေးလှပပြီး
အပြစ်အနာအဆာကင်းစင်နေတာကိုပဲတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီလို အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး အရောင်အသွေးလှပလွန်း
နေပြီဆိုရင် သတိထားရတော့မှာပါ ။
ကျောက်အတုဖြစ်ဖို့ များပါတယ် ။
သဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်မျက်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အပြစ်အနာအဆာမကင်းပါဘူး ။
ဂေါ် တို့ မှတ်စာ တို့Inclusion လို သဘာဝ
အမှတ်အသားလေးတွေ ပါနေတတ်ပါတယ် ။
Gas Bubble လို့ ခေါ်တဲ့ အမြုပ်ကလေးတွေ ပူဖောင်းလေးတွေ တစ်ခုတလေ ပါတတ်ပေမယ့်ချက်ကျောက်အတုမှာလို
တစ်နေရာ လောက် တစ်ခုလောက်ပဲ ပါတတ်တာပါ။
ထင်သာမြင်သာ ရှိအောင်မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်သင့်ပါတယ် ။
(2) နောက်တစ်ချက်ကတော့. . . . .
သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်အစစ်ရဲ့ အသားကြောဟာ
မကွေ့ မကောက်ပဲ တဖြောင့်တည်း တန်းနေတာကို
တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။
ချက်ကျောက် အတုတွေရဲ့ကျောက်အသားကြောတွေကတော့ . . ကွေ့ကောက် ရှုပ်ထွေး နေတတ်ပါတယ် ။
(3) နောက်တစ်ချက် သိသင့်တာက အရောင်ပါ။
သဘာဝကျောက်မျက်အစစ် တွေဟာ အရောင် မညီပါဘူး ။
အရည်မညီဘူး အရည်ကွက်တယ် စသည့်ဖြင့် ကျောက်မျက်လောကမှာ ပြောကြဆိုကြပါတယ် ။
ဥပမာ ပတ္တမြားတစ်ပွင့်ဆိုပါစို့။
ရုတ်တရက် သာမန်ကြည့်ရင် . . . .အနီရောင် တပြင်တည်းလို့
မြင်ပေမယ့်မှန်ဘီလူးနဲ့ သေချာထောင်ကြည့်ရင် မီးထိုးကြည့်ရင် . . .
အထဲမှာ . . .အရည်မညီတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။
အနီရောင်ထဲမှာကိုပဲ . . .အနုအရင့် ကွာခြားတဲ့နေရာတွေ ပန်းရောင် ခရမ်းရောင် ကွက်နေတာတွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ကျောက်တစ်ပွင့်လုံး အရောင်တပြေးညီ ဖြစ်နေတဲ့ကျောက်အစစ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ် ။
အရည်ညီ ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ကျောက်ဆိုတာ အပွင့်ရေ
ထောင်း သောင်းထဲမှာတောင် တစ်ပွင့် ရဖို့မလွယ် /
ချက်ကျောက် သို့မဟုတ် အပူပေးပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ မီးဖုတ်ကျောက်တို့ကတော့ . .
အရောင်ဟာ ကွက်ခြင်းမရှိ. . .
မပြောင်းလဲပဲ တပြေးညီ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
(4) နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် ။
သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်ရဲ့ အသားဟာ သိပ်သည်း
ကျစ်လစ်ပါတယ်။ကျောက်အတု ရဲ့ ကျောက်သားကတော့
သိပ်သည်းကျစ်လျစ်မှု မရှိပဲ. . .
ဖုံပွပွ ဖြစ်နေမှာပါ ။
ကျောက်အစစ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ကြည့်ရင် ပိုသိသာပါတယ် ။
လက်နဲ့ ကိုင်ဆကြည့်တာနဲ့သိသာပါတယ် ။
ဆိုဒ် အရွယ်အစား တူနေရင် . . . .
ကျောက်အစစ်က လေးလေးပင်ပင် ရှိပြီး
ကျောက်အတုကတော့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ် ။
ကြုံတုန်း . . . .
ကျောက်မျက်ရတနာတချို့ရဲ့ သိပ်သည်းဆကို ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
ပတ္တမြား( Ruby) =3. 99
နီလာ(Sapphire) =3. 99
ဥဿဖရား(Topaz) =3. 56
စိန်(Diamond) =3. 52
မြ(Emarald) =2. 71
ပုလဲ(Pearl) =2.70
(5) ကျောက်မျက်အတု ကို ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ . . .
နောက်ထပ် အချက် တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ် ။
အဲဒါကတော့ . . . . .
မာဆင့် ရှိတဲ့အတွက် . . . .ကျောက်သားမျက်နာပြင်ဟာ တော်ရုံ ပွတ်တိုက်မိရုံနဲ့ ပွန်းပဲ့ စင်းရာ မထင်နိုင်ပါဘူး ။
ကျောက်အတု တွေ ဟာ. . . .
မာဆင့် မာနှုန်း မာဂုဏ် မရှိတဲ့ အတွက် . . .
အဝတ်စကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပွတ်တိုက်ကြည့်ရင်
အစင်းရာ ပွန်း ထင်သွားပါလိမ့်မယ် ။
ဒီနေရာမှာလည်း . . .တလက်စတည်း . . .
ကျောက်မျက်တွေရဲ့ မာဆင်စကေး တွေကို ပြောပြခဲ့ပါ့မယ် ။
စိန် (Diamond) = 10 .0
နီလာ(Sapphire) =9.0
ပတ္တမြား(Ruby) =9.0
ဥဿဖရား(Topaz) = 8 .0
ဂေါ်မိတ်(Pyrope) = 6.5
မြ(Emerald) =7.5 - 8.0
ကျောက်စိမ်း(Jade) =6.5 -7.0
ကျောက်တစ်ပွင့်ဟာ. . . .
အရောင်လည်း တပြေးညီ အရည်ကွက်ခြင်းမရှိ /
အထဲမှာလည်း အပြစ်အနာအဆာ လုံးဝကင်းနေမယ် . . .ဆိုရင်
အဲဒါ အတု ဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ် ။
သေချာအောင် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်ရင် . . .
အသားကြောတွေ ကွေ့ ကောက်နေမယ်…
အမြုပ်(Gas Bubble)တွေ လည်း ရှိနေမယ်. . . .
ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုလည်း မရှိ မာဆင့်လည်း မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ . .
အဲဒါ . . ကျောက်အတု ဆိုတာ သေချာပါပြီ။
စစ်ဆေးခြင်း , မီးထိုးကြည့်ခြင်း , နေရောင်မှာ ထောင်ကြည့်ခြင်း. . . မှန်ဘီလူးကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းတွေ အပြင် . . . .
ကျောက်မျက်ရဲ့ ရူပဂုဏ်သတ္တိ တို့ပုံဆောင်ဓလေ့တို့ 
အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း တို့ . . .
အရောင်ပြောင်းခြင်း / နှစ်ဖြာအလင်းယိုင်ခြင်း /
အလင်းလက္ခဏာ /အတွင်းမီးအား /စုပ်ယူရောင်စဉ်တန်းများ /
မီးစုန်းတောက်ခြင်း လက္ခဏာများ စသည်ဖြင့်လည်း လေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ် ။
ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်(Ultraviolet Ray)နဲ့
ထိုးကြည့်ရင်လည်း . . . .
ကျောက်အတုနဲ့ အစစ်ရဲ့ ခြားနားမှုကို သိနိုင်ပါတယ် ။
ကျောက်အတုဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ ထိတဲ့အခါ. . . အရောင်မှိန်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။
သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်အစစ်ကတော့ ပိုပြီး လင်းလက်
တောက်ပ သွားပါလိမ့်မယ် ။
(သဘာဝကျောက်မျက် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လုပ်နေရင်း နဲ့ တဖြည်းဖြည်း သိလာတာလေးတွေ ချရေးကြည့်တာပါ ။
ကိုယ် သိထားတာ ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ ဆိုတာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ ရေးကြည့်တာပါ ။
အခု ရေးသွားတာတွေဟာ သာမန် ကျောက်အကြောင်း သိပ်မသိသေးသူတစ်ယောက်ရဲ့သာမန် အသိ အချက်အလက်လေးတွေမို့လွဲနေတာ တွေ့ ရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါဦး။
ကျွန်တော် လေ့လာဖို့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ။
သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။) :-) :-)
Aung Saim Gold & Jewellery shop
Post by J Jin Tai
Posted by chityin htoo at 16:170comments
chityin htoo | 17:42 |
ခေါက်ဆွဲ ၁ပိသာ နို့စိမ်းတစ်ဘူး
ကြက်သား ၂၀သား ရေဆေးအတုံး သေးသေးတုံးပါ ဘဲဥ၅လုံးပြုတ်ပါခွံနွှာပါ
ကြက်ရိုး(တောင်ပံ ခြေထောက်) ၃၀သား
ပဲပြား ၂တုံး ရေဆေး အတုံးသေးသေးလေးတုံးပါ
မွှေး ပဲစိမ်းမှုန့် ၂၅၀ကျပ်တန် ၁ထုပ် ရေနှင့်ပြစ်ပြစ်ပျော်အောင်ဖျော်ထားပါ်
ကြက်သွန်ဖြူ ၂တက် ခွံနွှာ ညက်ညက်ထောင်းပါ်
ဂျင်း လက်နှစ်ဆစ် ခွံနွှာ ညက်ညက်ထောင်းပါ်
ကြက်သွန်နီ ဥကြီး ၄လုံး ပါးပါးလှီးပါ
ဟင်းခတ်မှုန့်အနည်းငယ် သကြားဟင်းခတ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့် ပြုတ်အိုးတည်ထားပါ
၂့  ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်း တို့ကိုဆီသပ်ပါ
နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ် ငြုပ်စိမ်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပါ မွှေးနီလာပါက တုံးထားသောကြက်သားနှင့်
၃့ ကြက်ရိုးပြုတ်အိုးဆူလာပါက ပဲစိမ်းဖျော်ရည်ကိုနှံ့အောင်ပြန်မွှေ၍ ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲထည့်ပါ မကြာခဏ ဆူလာသည်အထိမွှေပေးပါ
၄့ ပဲစိမ်းရည်ဆူလာပါက ကြက်သားဆီသပ်ကို ဆီစစ်ပြီးထည့်ပါ နို့စိမ်းဘူးဖေါက်ထည့်ပါ
၅့ ကြက်သွန်နီ ဥ သေးလေးများ ၁၅ကျပ်သားခန့် ခွံနွှာ၍ အလုံးလိုက်ထည့်ပါ
၆့ ပဲသွေးကြိုက်ပါက ရေဆေးပြီးတုံး၍ထည့်ပါ
ဟင်းအရသာအတွက် ဆားနှင့်ဟင်းခတ်မှုန့်ကိုသာ ချိန်ဆထည့်ပါ
ငံပြာရည် သိပ်မထည့်ပါနှင့် အနံ့ကဲသွားနိုင်ပါသည်
မုန်ကြွပ်ကြိုက်လျှင်မုန်ကြွပ်ကြော်နှင့် ကြက်သွန်စိမ်း တွဲဖက်စားသုံးပါရှင်
Posted by chityin htoo at 17:420comments
ရှမ်းချဉ် (သို့မဟုတ်) မုန်ညင်းချဉ် လုပ်နည်း
chityin htoo | 19:13 |
မုန်ညင်းစိမ်းကို ရေများများနဲ့ စင်ကြယ်အောင် ရေဆေးပြီး ပထမ နှစ်ရေလောက်ကို သွန်ပစ်ပါ။
တတိယတစ်ကြိမ်ကျရင်တော့ ရေပုံးကြီးကြီးထဲမှာ ရေထည့်၊ ဆားကို ထည့်ပြီး ဆားရည်ဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက် စိမ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် မုန်ညင်းစိမ်းတွေကို ရေထဲကနေ ဆယ်ယူ၊ ရေစစ်ပြီး တစ်နေလှန်းပေးပါ။ တစ်နေလှန်းလိုက်တဲ့အခါ မုန်ညင်းတွေ နွမ်းသွားပြီး အချဉ်တည်ဖို့ အကောင်းဆုံးအနေအထားကို ဖြစ်စေပါတယ်။
မုန်ညင်းစိမ်းကိုတော့ နှစ်လက်မအရွယ်အစား လောက်လေးတွေ ရအောင် ဖြတ်တောက်ပါတယ်။ ပြီးရင် မုန်လာဥနီ၊ ဂျူးမြစ်နဲ့ ပဲပိုးတီတို့ကိုလည်း သန့်စင်အောင် ရေဆေးပြီး ရေစစ်ပေးထားပါ။ ဂျူးမြစ်ကို ရေဆေးပြီးတဲ့အခါ အမြစ်လေးတစ်ချောင်းချင်းစီကို နှုတ်ယူပြီးတော့ တစ်လက်ခွဲအရှည်ရအောင် ဖြတ်တောက်ပေးထားပါ။ မုန်လာဥနီကိုလည်း ပန်းပွင့်လေးတွေ ဖော်နိုင်သလို အရှည်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတုံးလေးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်သလို တုံးပေးထားပါ။ ပဲပိုးတီကိုတော့ အလုံးလိုက်လေးတွေ ထည့်လိုက် လို့ ရတာမို့ ဒီအတိုင်းပဲ ရေစစ်ထားလိုက်ပါနော်။
(ကြက်သွန်ဥလေးတွေပါထည့်ချင်ရင်တော့ ကြက်သွန်မြိတ်ဥလေးတွေကို သန့်စင်အောင်ရေဆေး၊ ထိပ်ပိုင်းလေးတွေဖြတ်တောက်ထားပြီး ရေစစ်ပေးထားပါနော်။)
ပြီးရင် အမွှေးအကြိုင်တွေအတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပြင်ဆင်ရအောင်နော်။ ချင်းကို အခွံနွှာရေဆေးပြီး ခပ်လွှာလွှာလေးတွေရအောင် လှီးပေးထားပါ။ နံနံစေ့နဲ့ မုန်ညင်းစေ့တို့ကို ဒယ်အိုးထဲ ထည့်ပြီး မီးနွေးနွေးလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလှော်ပေးပါ။ အဲ့ဒီလိုလှော်လိုက်ရင်းနဲ့ အနံ့တွေသင်းလာတဲ့အခါကျရင် ဒယ်အိုးကို မီးဖိုပေါ်ကနေချပြီး အထဲက အမွှေးအကြိုင်အလှော်တွေကို ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး မညက်တညက်လေးထောင်းပေးပါနော်။
ပြီးရင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ချင်းတ၀က်ကို ထည့်ပြီး ထောင်းလိုက်ပါနော်။ ငရုတ်သီးအရောင်မှုန့်အတွက်ကိုတော့ ငရုတ်သီး အပုပွတောင့်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြိတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်နော်။ ကြံသကာကိုလည်း ချေပြီးထည့်ပေးပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပလတ်စတစ်ဇလုံခပ်ကြီးကြီးကိုယူ၊ ပြီးရင် ခုနက အသီးအရွက်တွေထည့်၊ အမွှေးအကြိုင်တွေထည့်၊ ကြံသကာ၊ ဆားနဲ့ ဆန်အရက်အနည်းငယ်တို့ကိုထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင် နယ်ပေးပါ။ ပြီးတော့မှ ပုလင်းသန့်သန့် ဒါမှမဟုတ် စဥ့်အိုးသန့်သန့်ထဲ ဖိသိပ်ပြီး ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ကနေ ပလတ်စတစ်လေးခံပြီးတော့မှ အဖုံးကို လုံအောင်ပိတ်ပေးပါနော်။ အဲ့ဒီလိုသိပ်ထားပြီး ပူတဲ့ရာသီဆို ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း၊ အေးတဲ့ရာသီဆိုရင် တစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းဆိုရင်တော့ အရသာရှိလှတဲ့ မုန်ညင်းချဉ်လေး ရပါပြီနော်။
Lu Lu Cooking
Posted by chityin htoo at 19:130comments
ပတ္တမြား အရည်အသွေးများ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
chityin htoo | 02:42 |
(၁)လည်သီးရည် ကြက်ဖလည်ပင်းမှထွက်သော သွေးအရောင်၊ အနီရောင်အပြည့်ရှိသည့် ပတ္တမြားကျောက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၂)ငရှဥ့်သွေးရည် ငရှဥ့်သွေးကဲ့သို့ အနီရောင်ရှိသည့် ပတ္တမြားကျောက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၃)ခိုသွေးရည် ပတ္တမြားကျောက် အနီရောင်တွင် အပြာရည်စွက်သော အရောင်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၄)ယုန်သွေးရည် ပတ္တမြားကျောက် အနီရောင်တွင် အ၀ါရည်စွက်သောအရောင်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၅)သပြေသီးရည် ပတ္တမြားကျောက် အနီတွင် အပြာ၊ အညို ရောယှက်နေသည့် သပြေသီးမှည့် အရောင်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၆)ဘုံဘိုင်ညွန့်ရည် နှင်းဆီပန်းအရောင်ရင့်၏ စိုပြေသော နီနီရဲရဲ အရောင်မျိုးးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၇)ဘုံဘိုင်ရည် လူငယ်၏အသွေးအရောင်ကဲ့သို့ အနီရောင်သက်သက်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၈)ကျောက်တိမ်းရည် အနီတွင် အပြာရည်လွန်သော အရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၉)အရည်ကျ အနီရောင် ဖျော့သောအရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၀)ပန်းရည် နှင်းဆီပန်းရောင်ကဲ့သို့ အရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၁)ကြက်သည်းရောင်အရည် ညိုပုပ်ပုပ်နှင့် မည်းသယောင်ယောင်နီသော အနီပုပ်ရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၂)ကြက်သွန်ဥခွံအရည် အနီရောင်ဖျော့လျှက် ဖြူသယောင် အရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၃)ထုံးခြောက်ရည် နီသော်လည်း ဖြူပြီး ခြောက်တောက်တောက် ဖြစ်နေသော အရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၄)ကတ္တီပါရည် ကတ္တီပါအပြာစ ကဲ့သို့ အပြာရောင်ရှိသော နီလာကျောက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (နီလာတွင်သာ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။)
Aung Siam Gold & Jewellery
Posted by chityin htoo at 02:420comments
chityin htoo | 01:44 |
ဘန်းဆိုဒ် ၉+ ၁၁ လက်မ
ဌက်ပျောသီး....၁၇ လုံး (အရွယ်တော်)
ဂျုံမှုန့်.. ..၁၀ ကျပ်သား(160g)
အုန်းသီး.. ..၁လုံး (အမှုန့်ခြစ်ထားပါ)
သကြား...၂၀ ကျပ်သား( အချိူမကြိုက်ရင်
လျှော့ပါ) (320 g)
ထောပတ်.....၁၀ ကျပ်သား (160g)
နို့မှုန့် (pep)....၂ထုပ် (30 g)
အစ်မ Khine Chaw Suနည်းကိုကြည့်ပြီး
ရွှေကြည်ထည့်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ် ရှင့်
ဂျုံ +ထောပတ် +သကြား+ အုန်းသီးမှုန့်
နို့မှုန့် + ဆား+ ရွှေကြည် ထည့်ပြီးအားလုံးသမသွားအောင် ရောနယ်ပါ
နယ်ပါ (food colour မထည့်လဲရပါတယ်)
ထောပတ် ၂ဇွန်းလောက် ဆမ်းပြီး
ပြီးရင် ဘိန်းစေ့ဖြူးပြီး အပူချိန်
၂၀၀ံ စင်တီဂရိတ်နဲ့ အပေါ်မီး များများ
အောက်မီးနဲနဲ နဲ့ မိနစ် ၄၀လောက် ဖုတ်ပေးပါ
(အောက်မီး ကို ၁၀မိနစ်လောက်ပဲ
မိနစ် ၃၀ လောက်နေရင် ဓားချွန်
လေးနဲ့ ထိုးကြည့်ပြီး မုန့်နှစ်ကပ်မပါလာ
တော့ရင် ကျက်ပါပြီ အပေါ်ယံ နီလာအောင်
၁၀ မိနစ်လောက် ထပ်ထားပြီးရင်
Credit: Lin Thawdar
Posted by chityin htoo at 01:440comments
chityin htoo | 07:47 |
အကြည်တော် စုစည်းမှုပါ။ တောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အတော်များများ ဒီထဲမှာပါပါတယ်။ အကြည်တော် တောင်းဆိုနေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်မှ မဟုတ်တာ မောင်
ကျွန်တော့်ဘဝလေးမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်
မိတ္တ ဟဒယ ဟာသ တက်ကျမ်း
လျှို့ ဝှက်သောကစားပွဲ ၁
လျှို့ ဝှက်သောကစားပွဲ ၂
သံသရာအကွေ့ တစ်ရာ ၁
သံသရာအကွေ့ တစ်ရာ ၂
ဟားခလုတ် ဟာသစာစုများ ၁၄
ဟားခလုတ် ဟာသစာစုများ ၃
အသည်းကွဲ ၂၄ နာရီ
စောကြည်ဖြူ နှင့် မြင့်စန်းရီ်
ယောက္ခမနဲ့ ၁၀၀၁ ည
Posted by chityin htoo at 07:470comments
chityin htoo | 17:14 |
ဒီတစ်ပါတ် အိမ်ရှင်မများ အချက်အပြုတ်အစီအစဉ်အတွက် တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲတော်ကြီးကို ကြိတ်ကြိတ်တိုး ကျင်းပနေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ရှမ်းအစားအစာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို ထည့်သွင်းပေးချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲကို ၈၀၀ကျပ်နဲ့ ဝယ်စားလို့ရပေမယ့် အနှစ်နဲ့ အသားနည်းတာကြောင့် စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်ရဖူးတယ်မလား။ အခဲမကြေတာလည်း ဖြေလို့ရ၊ အိမ်ရှင်မလည်း ပီသ၊ မိသားစု ဆုံတဲ့ မနက်ဖြန် တန်ဆောင်တိုင် ပိတ်ရက်လေမှာ လက်စွမ်းပြချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ ချက်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်မယ်နော်..
ဆန်ခေါက်ဆွဲ ၁ထုပ်၊ မြေပဲဆံလှော် ၅ကျပ်သား၊ ရှမ်းချဉ် ၅ကျပ်သား၊ ကြက်သွန်မိတ် ၁စည်း ငရုတ်သီးဆီကြော်၊ ပဲငံပြာရည်အပျစ် အနည်းငယ်၊ တို့ ဖူးကြော်၊ ၀က်ခေါက်ကြော်၊ ပဲပုပ်စေ့လှော်ထောင်းပြီးသား အနည်းငယ် (optional)၊ ပဲရွက် အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ၊ တရုတ်မဆလာ ဇွန်းသေး ၂ဇွန်း၊ နှမ်းဖြူ အနည်းငယ်၊ ကြက်ရင်ပုံသား၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲငံပြာရည်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
- အဓိကကျတဲ့ ကြက်သားဟင်းအနှစ်ကောင်းအတွက်
ကြက်သားရင်ပုံသား၂ခုကိုသန့် စင်ပြီး အတုံးသေးသေးတုံးပါ။ နနွင်းနဲ့ ဆားအနည်းငယ်တို့နှင့်ရောနယ်ပါ။ ဟင်းအနှစ်အတွက် ခရမ်းချဉ်သီး (၄)လုံးကို အစေ့ဖယ်ပြီး ပါးပါးလှီးပါ။ ကြက်သွန်နီအလတ်စား ၄လုံး၊ အဖြူ (၈)မွှာလောက်ကို ပါးပါးလှီးပါ။ အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး ဆီဆူလာရင် ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနံ့ မွှေးလာရင် ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို အရင်ကြေအောင် ချက်ပါ။ ပြီးနောက် ကြက်သားကို ထည့်လုံးပါ။ ၃မိနစ်ခန့် ကြာလျှင် ရေနွေးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဆီပြန်အောင် ဆက်တည်ပါ။ ဆားအနည်းငယ် နှင့် ပဲငံပြာရည် ထည့်မွှေပါ။ ဟင်းအနှစ်အရည်အတွက် ရေနွေးအနည်းငယ် ထပ်တည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားပါ။
- ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာလောက်ကို လုပ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဆီချက်လုပ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူကို အရင်ဆီသတ်ပါ။ မီးပိတ်ပြီးမှ တရုတ်မဆလာထည့်မွှေပါ။ နှမ်းဖြူထည့်ပြီး ပန်ကန်လုံးထဲ ပြောင်းထည့်ပါ။
- ဆန်ခေါက်ဆွဲတွေကို ရေ နှစ်နာရီခန့်ကြိုစိမ်ပါ။
- မြေပဲဆံလှော်ကို အခွံချွတ်ပြီး မညက်တညက်ထောင်းထားပါ။
- ကြက်သွန်မိတ်နှင့် ရှမ်းချဉ်ကို သေးသေးလှီးထားပါ။
- ဟင်းချိုအတွက် ကြက်ရိုးတွေကို ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့် ပြုတ်ထားပါ။
- မုန့်ဖတ်ပြုတ်ရန်အတွက် အ၀ကျယ် ရေနွေးအိုးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားပါ။
စားနိုင်သလောက် မုန့် ဖတ်ကို ရိုးတံရှည်ဇကာထဲထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေးအိုးထဲ စိမ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တူဖြင့် အနည်းငယ်မွှေပါ။ ရေစစ်ပြီး စားမယ့် ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပါ။ ကြက်သားဟင်းအနှစ်၊ မြေပဲဆံလှော်မှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်စတဲ့ အစာပလာ အနည်းငယ်စီထည့်ပြီး ပြင်ပေးပါ။ ပဲငံပြာရည်အပျစ်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဖြင့် ပါလေကာ ထည့်ပေးပါ။ ကိုယ်ကြိုက်သလို ချဉ်ငံစပ် ဖြစ်အောင် လိုတာထပ်ထည့်ပါ။
ဟင်းချိုအတွက် ကြက်ရိုးပြုတ်ရည်ကို ခပ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်မိတ်နှင့် ငရုတ်ကောင်းအနည်းငယ် ထည့်လိုက်ရင် စိတ်ကြိုက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲကောင်းလေးတစ်ခွက် အရသာရှိစွာ အားရပါးရ စားဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ……
Posted by chityin htoo at 17:140comments
chityin htoo | 00:58 |
မက်မွန်မြေက ချစ်တေးတပုဒ် တောင်းထားသူများ တွက် မဖတ်၇သေးသူများတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မက်မွန်မြေကချစ်တေးတပုဒ်ဆိုတာ..
သိုင်းလောကမှ သူရဲကောင်းများ (၁၂- အုပ်တွဲ) ဖြစ်ပါတယ်။
(post uploaded links from koyinnyein)
Posted by chityin htoo at 00:580comments
တစ္ဆေ , သရဲ အကြောင်းများစုစည်းရာ
chityin htoo | 14:47 |
တာတေ စာအုပ်များစုစည်းမှု့ (၁၃)အုပ်
မှတ်ချက်။ ။ ည မဖတ်ရ။ (ဖတ်ပါက သင်အိပ်ပျော်မည်မဟုတ်ပါ။)
စည်းကမ်း။ ။ အကယ်၍ဖတ်မိပါက ညဘက်တွင်တစ်ယောက်တည်းဖတ်ပါ။ အခန်းမီးပိတ်ပြီး ဖရောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီးဖတ်ပါ။
(၁) သင်းချိုင်းတစ်ရာ မဖဲဝါ စာအုပ်
(၂) မဖဲဝါကို ကိုက်တဲ့တစ္ဆေ စာအုပ်
(၃) မဖဲဝါရဲ့အိမ် စာအုပ်
(၄) ကိုယ်တွေ့ မဖဲဝါ စာအုပ်
(၅) ကိုယ်တူကိုယ်ခွဲ မဖဲဝါ စာအုပ်
(၉) ကဝေဆယ့်နှစ်ကြိုး စာအုပ်
(၁၀) ကဝေပျံ စာအုပ်
(မဖတ်ရသေးသူများ/postရှာရခက်နေသူများအတွက် တင်ဖူးသမျှ တာတေစာအုပ်များ စုစည်း၍ ပြန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by chityin htoo at 14:472comments
chityin htoo | 20:15 |
ယခုပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့အပင်ကတော့ ဒန္တသုခပင်(တောဓါးပြပင်)ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအပင်ဟာ အလွန်ဆေးစွမ်းထက်သော အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပင်ကို မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီအပင်ကို Conyza cinerea L လို့ သိပ္ပံနာမည်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ Little ironweed ဆိုပြီးတော့လည်း ခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ်။ ဒီအပင်ရဲ့ ပဉ္စငါးပါး(အပင်၊ အသီး၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အမြှစ်) အားလုံးဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ၁။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများအတွက် ဒီအပင်ကို ၂ ပင်၊ ၃ ပင်ခန့်ကို ယူ၍ ရေနွေးပွတ်ပွတ်ဖြင့် (၁၀)မိနစ်ခန့် ပြုတ်ကာ ဆေးရည်ကို ၂ လခန့် သောက်သုံးပေးပါက ဆေးလိပ်စွဲနေတဲ့ အာသီသများကို ရာခိုင်နှုန်း ၆၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင့် လေ့လာတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ ၂။ အနာအမျိုးမျိုးအတွက် ဒီဆေးပင်၏ အရွက်အစိမ်းကို ထောင်း၍ အနာပေါ်ကို အုပ်ပေးပါက အနာများ ကျက်သွား၍ တဖြေးဖြေး သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါမည်။ ၃။ ပွေး၊ ၀ဲ၊ ညှင်းများအတွက် အရေပြားပေါ်တွင် ပေါက်နေသော ပွေး၊ ၀ဲ၊ ညှင်းနှင့် နှင်းခူးရောဂါများကိုလည်း ၄င်းဆေးပင်တစ်ပင်လုံးကို ကြိတ်၍ အရည်ရော အဖတ်ပါ ရောဂါပေါ်ကို အုပ်ထားပါက ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၄။ ဆီးချိုသမားများအတွက် ဆေးပင်၏ အပင်နှင့်အရွက်ကို အခြောက်လှန်း၍ လက်ဖက်ခြောက်ကို သုံးသကဲ့ ရေနွေးပွက်ပွက်ထဲ ထည့်ပြုတ်ကာ အ၀ါရောင်သန်းနေသည့်အထိ ပြုတ်သောက်ပေးပါက ဆီးချိုရောဂါသက်သာစေပြီး ကိုယ်လက်ညောင်းညာခြင်းများ၊ ဇက်ကျောတက်ခြင်းများကို သက်သာစေပါသည်။ ၅။ အစာအိမ်၊ အသည်းရောဂါ၊ ဆီးရောဂါနှင့် မျက်စိရောဂါများအတွက် ဒီဆေးပင်ကို ရှေးခေတ်သမားတော်များကလည်း အစာအိမ်၊ အသည်းရောဂါ၊ ဆီးရောဂါနှင့် မျက်စိရောဂါနှင့် ငှက်ဖျားချွေးထုတ်ဆေးများအဖြစ် အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။ ၆။ ဒီဆေးပင် အိန္ဒိယသမားတော်များကတော့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ ဆီးရွှင်ဆေးနှင့် သံချဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ၇။ ဒီဆေးပင်ကို ကမ္ဘောဒီးယားသမားတော်များကတော့ ငှက်ဖျားရောဂါ၏ ကိုယ်ပူကျ ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၈။ ဒီဆေးပင်ဟာ သွေးကျရောဂါကိုလည်း သက်သာစေ၍ သွေးသားကောင်းမွန် လာစေရန် အလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ၉။ ဒန္တသုခဆေးပင်၏ အစွမ်းအထက်ဆုံး ဆေးနည်းကတော့ မြွေဆိပ်ကို ဖြေနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြွေ၊ ကင်း၊ ပျား၊ ပုရွတ်ဆိတ်စတဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့အကောင်များ အကိုက်ခံရလျှင် ၄င်းအပင်၏ အရွက်၊ အကိုင်း၊ အပွင့်တို့ကို ရောကြိတ်၍ အနာပေါ်ကို အုပ်ပေးထားပါက ၅ မိနစ်အတွက် အဆိပ်ပြေသွားပါသည်။ နယ်စွန်းနယ်ဖျားဒေသ၊ တောဒေသနှင့် မြွေပေါသည့် အရပ်ဒေသတို့မှာ နေထိုင်ကြသူများအတွက် အလွန်အဖိုးတန်သည့် အရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်း Share ပေးခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးရှိလှသည့် လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်နိုင်ကြပါစေ။ စောနွဲ့ နေဆိုင်(ပူတာအို) ကိုးကား ။ ။ မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ အလှပုံရိပ်များ
Posted by chityin htoo at 20:150comments
chityin htoo | 02:35 | စားသေညက်စဂာ
ကြေးအိုးက ဆိုင်မှာ စားရသလို တူပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုပါဘဲ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဟင်းရည်က အဓိက ကျတာမို့ အခု ပေးထားတဲ့ ချက်နည်းအတိုင်းသာ ချက်ပါ။ တထပ်တည်းမကျရင်တောင် စားရတာ စိတ်တိုင်းတော့ ကျပါမယ်။ အသားလုံးတဲ့ အခါမှာလည်း တရုပ်မဆလာ ကြိုက်ရင် ထည့်ပြီး နှပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသားလုံးကို ငါးဖယ်ထည့်လုံးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ငါးဖယ် ၀ယ်မရနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ကော်မှုန့် နိုင်နိုင်လေးနဲ့ လုံးပေးပါ။
၁။ ကြက်ရိုး (သို.မဟုတ်) ၀က်ရိုး
၂၊ အူစုံ ၊ အသည်းစုံ
၃၊ တောက်တောက်စင်းထားသော အသား
ရ၊ ဆန်ပြား၊ ကြာဆံ
၈၊ ဘဲငန်းပျံ ငရုပ်ဆီ
အရိုးကို ရေဆေးပြီး အိုးကြီးကြီးထဲတွင် ရေ ရိုးရိုးနှင့် ထည့်ပြုတ်ပါ၊ ဆား ၊ အချိုမှုန်. သုံးလျှင် အချိုမှုန်. ထည့်လို.ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကြက်သားမှုန်. မထည့်ပါနဲ.၊ အရသာကို ပြောင်းသွားနိုင်လို.ပါ၊ နောက်ပြီး သကြားကို ချိန်ဆ ပြီး ထည့်ပါ၊အချို လေးလေး ဖြစ်အောင် ချိန်ဆ ထည့်ပါ၊ အရိုးများ နူး နေသည်အထိ ပြုတ်ပေးပါ၊
သတိပြုရန်မှာ- အထက်ပါ အစာပလာများမှ လွဲပြီး တခြား ကောင်းနိုင်မည် ထင်သည့် အရာများ လျှောက်မထည့်ပါနဲ.။ အထူးသဖြင့်.... ဂျင်း၊ တရုပ်နံနံ လုံးဝ မထည့်ရ။
အသားနှင့် အရွက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း
၁၊ တောက်တောက်စင်းထားသော အသားများကို ကော်မှုန်.၊ ဆား၊ အချိုမှုန်.၊ ကြက်ဥ အကာ
( နှမြောလျှင် အနှစ်ပါ ထည့်)၊ တရုပ်ကြက်သွန်မိတ်၊ ငရုပ်ကောင်း တို.နှင့် နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ၊
၂၊ မုန်ညင်းစိမ်းကို အရွက်ချွေထားပါ၊
၃၊ အသည်းအမြစ်၊ အူစုံ အသည်းစုံကို ရေစင်စင်ဆေး၊ အနေတော်လှီး ပြီး ဆား၊ အချိုမှုန်.တို.နှင့် နယ်ထားပါ၊ အမျိုးအစား တခု ချင်းဆီကို ရေလဲပြီး တခု ချင်းစီ ပြုတ်ပါ၊ ဗန်းထဲတွင် အသင့်ပြင်ထားပါ၊
( ဟင်းရည် ထဲတွင် အလွယ် ထည့်မပြုတ်ပါနှင့်)
၄၊ ငုံးဥ ကို ပြုတ်၊ အခွံနွာ အသင့်ပြင်ထား
၅၊ ပဲပြားကို လိုသလောက် လွာထားပါ၊
၆၊ ဆန်ပြား နှင့် ကြာဆံ ကို ရေစိမ်ပြီ စစ်ထား၊ ပြီးရင် ဗန်းထဲတွင် ခင်းထားပါ၊
နှမ်းဆီ ငရုပ်ကောင်း ပြင်ဆင်ထားခြင်း
နှမ်းဆီကို ပူအောင် ဒယ်အိုးမှာ တည်၊ ခွက်ထဲမှာ ငရုပ်ကောင်း လှော်ထောင်းကို ထည့်ထား၊ နောက် ဆီပူ လောင်းထည့် ပြီး ပွဲပြင်မည့် နားတွင် အဆင်သင့် ပြင်ထားပါ၊
- သီးသန်. လက်ကိုင် အိုးထဲတွင် တပွဲစာ ဟင်းရည်ထည့်၊ ပွက်အောင်တည်၊
တည်နေချိန်တွင် အသားကို လုံးပြီး ထည့်၊
- အူစုံ အသည်းစုံထည့်
- ကြာဆံ (သို.) ဆန်ပြားကို အလိုရှိသလောက်ထည့်ပြုတ်
- ငုံးဥ ထည့်
- အရွက်စိမ်း နောက်ဆုံးမှ ထည့်
- ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် အသား ကျတ်မကျတ် ချိန်ဆ ပြီးမှ ပန်းကန်ထဲကို လောင်းထည့်ပါ
- ပြီးရင် နှမ်းဆီ ငရုပ်ကောင်း (သို.) ငရုပ်ကောင်း လှော်ထောင်းကို လိုသလောက်ထည့်ပြီး စားပါ
ငရုပ်သီး စိမ်း ကို ပါးပါးလှီး
ရှာလကာရည် ၃ ဇွန်း
ငံပြာရည် အနည်း ငယ် နှင့် ရေအနည်းငယ် ထည့် ( ရေကျတ်အေး)
အားလုံးကို ထည့်မွေ၊ ပြီးလျှင် အချဉ် နဲ. အပေါ့ကို မြည်း၊ လိုတာ ထပ်ထည့်
ငရုပ်ဆီ နှင့် တွဲပြီ ကြေးအိုးကို စားနိုင်ပါပြီ။
Credit to ချက်ကြီးတို့မီးဖိုချောင်
min naing mg mg
Posted by chityin htoo at 02:350comments
ဂျပန်နိုင်ငံက အိုခီနာဝါသူတွေ ဘာ့ကြောင့် နှစ် ၁၀၀ ထိအောင် အသက်ရှည်ရသလဲ?
chityin htoo | 02:21 | ကျန်းမာသုတ | စာကြည့်တိုက် | ဗဟုသုတ | ရသ
အိုခီနာဝါ သူတွေရဲ့ အသက်ရှည်ရတဲ့ အရေးကြီးသောအစားအစာ (၈) မျိုးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
(၁). ကြက်ဟင်းခါးသီး ゴーヤ
သိပ်မမှည့်သေးတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီး အစိမ်းကို အစားအစာအဖြင့် ကြော်လှော် ချက်ပြုတ် စားသောက်တတ်သော အလေ့အထရှိခြင်း။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ကြက်ဥဖောက်၍ ခါနိုဒါ (キャノラ油)ဆီဖြင့်မွှေကြော်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ပါးပါးလှီး၍ ဆန်းဒွီင့် (sandwich)မှာထည့်ပြီးစားသုံးခြင်း နင့် ဆူစီထမင်းလိပ်တွေမှာထည့်၍ စားသောက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိုခီနာဝါ သူတွေလည်း တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလို မုန်လာဥနီကိုစားသုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်လာဥနီရဲ့ အရွက်တွေကိုတော့ နုတ်နုတ်ကလေးစင်းပြီး ကြက်ဥကိုဖောက်ထည့်၍မွှေကာ ထမင်းနဲ့ကြော်စားကြပါတယ်။ ထို့အပြင် နုတ်နုတ်စင်းထားတဲ့အရွက်တွေကိုဟင်းရည်တွေမှာလည်းထည့်ကာ သောက်သုံးကြပါသေးတယ်။
(၃). သပွတ်သီး ヘチマ
အထူးသဖြင့် ဟယ်ချီမ လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်သဗွတ်သီးတွေကို ဟင်းခတ်အဖြင့်နဲ့ တိုးဟူး မီဆိုး ဟင်းရည်တွေမှာထည့်ကာသောက်သုံးကြပါတယ်။
(၄). အပူအစပ်　辛い野菜と果物
ပူစပ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်မြစ် သစ်ဥတွေဟာ ရောဂါဘယတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီး ဆနွင်းပင်ဆနွင်းမှုန့်ကြတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ငြုတ်သီးဟာ နှလုံးအတွက်ကောင်းမွန်ကာ စမုံစေ့ကိုတော့ ဟင်းခတ်မှုန့်အဖြစ်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် သို့ မဟုတ် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရည်တွေမှာထည့်သုံးတဲ့အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကြော်တွေမှာလည်းသုံးကြပါတယ်။
(၅). ရေငြိ ワカメ
အထူးသဖြင့် ရေငြိပင် အနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဥပမာ- ကွန်ဘု（こんぶ）၊ နိုရိ（のり）၊ ဟိကျိခိ（ひじき）၊ ၀ါခမဲ（わかめ） တွေကို နေပူလှန်း၊ အခြောက်ခံ အမှုန့်လုပ် အကြွပ်ကြော် အပြုတ်ရည်လုပ်သောက် စတဲ့အမျိုးမျိုးသောဟင်းတွေမှာ အဓိကထည့်၍စားသုံးကြပါတယ်။
(၆). ကန်စွန်းဥ サツマイモ
ကန်စွန်းဥတွေကို တစ်လက်မအထူလောက်လှီးဖြတ်၍ သံလွင်ဆီဖြင့်ကြော်ကာ အကြော်အဖြင့်နဲ့ အဓိကစားသုံးကြတဲ့အပြင် ကန်စွန်းဥ အလုံးလိုက်ကို သစ်ရွက်ဖြင့်အုပ်၍ မီးဖုတ်ကာ သားရေစာအဖြစ်လည်းစားသုံးကြပါတယ်။
(၇). ရောစပ်ဆန် 全粒　（ピラフ）
အိုခီနာဝါ သူတွေဟာ မုယောစပါး၊ ပြောင်းမျိုးနှံစားပင်၊ အညိုရောင်ဆန် စတဲ့ အမျိုးမျိုးသောပြောင်းနှံဆန်တွေကိုရောစပ်ကာ ထမင်းအဖြင့်ချက်စားကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ဒီရောစပ်ဆန်တွေကို စားသုံးရင် အားအင်တွေပိုပြီးတိုးကာကျန်းမာစေတယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၈). ပဲအမျိုးမျိုး　大豆/枝豆
ပဲအမျိုးမျိုးမှထွက်သော သီးနှံတွေဖြစ်ကြတဲ့ တိုဟူး၊ မီဆိုး၊ အယ်ဒါမမဲ（枝豆） လို့ခေါ်သောပဲစိမ်း တွေကိုထမင်းနဲ့ကြော်ပြီး မီဆိုး ကိုတော့ အပြုတ်ရည်အဖြင့်နဲ့ ယှဉ်တွဲကာစာသုံးကြပါတယ်။ ထို့အပြင် တိုဟူး ချီးစ်ကိတ် လည်းလုပ်စားကြပါသေးတယ်။
အိုခီနာဝါသူတွေအသက်ရှည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေသိသွားပြီဆိုတော့ သူတိုတွေစားသောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်း စားသောက်ချင်တဲအ့ခါ စားသောက်သုံးဆောင်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့။
J Jin Tai
Posted by chityin htoo at 02:210comments
Labels: ကျန်းမာသုတ, စာကြည့်တိုက်, ဗဟုသုတ, ရသ
chityin htoo | 19:21 | စာကြည့်တိုက် | ထူးဆန်းထွေလာ | ဗဟုသုတ
အစိမ်းရောင်ရွာကလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိချင်နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျွန်တော်ဖတ်မှတ်ပြီးသိသလောက် လမ်းညွန်ပြီးပြောပြပါရစေလားခင်ဗျာ။
မိတ်ဆွေတို့ တစ်ခါတစ်လေ စဉ်းစားမိပါ့မလားတော့မသိဘူး တစ်ကယ်လို့များ မြို့ကြီး၊ရွာကြီး မြို့ငယ်ရွာငယ်လေးတွေဟာ လူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါက်နေမလဲဆိုတာတွေပေါ့။ ကဲ...ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီလိုစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သေခြာတာကတော့ သဘာဝတရားတွေက ထိုနေရာကို ၀င်ရောက်ကာနေရာယူလာလိမ့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှမတွေးမထင်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီလိုလှပတဲ့ သဘာဝအလှတရားက၀င်ရောက်လို့နေရာယူခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အစိမ်းရောင်နဲ့အိမ်ကလေးတွေဟာ တရုတ်ပြည် 嵊泗 ရှန့်စူ့မှာတည်ရှိပြီး 钱塘江 ချီယန်ထျန်ကျန်း ဆိုတဲ့မြစ်နဲ့ 长江 ချန်ကျန်းမြစ် ကမ်းနဘေးမှာတည်ရှိပြီး ခရီးသွားများအထူးစိတ်ဝင်စားလျှက်ဖြစ်နေတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များအခုလို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလာရောက်လည်ပတ်ချင်ကြသလဲဆိုရင်တော့ နေအိမ်တွေဟာလူတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ထားခြင်းကိုခံရပြီး အစိမ်းရောင်အပင်များဖြင့်ဖုံးလွမ်းကာ သဘာဝအတိုင်းမြေပေါ်မှပေါက်လာတဲ့အိမ်ကလေးများအလားလို့တောင်ထင်ရပြီး အရမ်းပဲလှပနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့လည်း တရုတ်ပြည်အလည်အပတ်သွားရောက်လို့ ဒီပြည်နယ်ဘက်ရောက်ခဲ့ရင် အစိမ်းရောင်ရွာကလေးရှိတဲ့နေရာကို အလည်အပတ်အဖြင့်ဝင်လည်ခဲ့ကြအုံးနော်။
J Jin Tai မှသိသလောက်ရေးသားမျှဝေသည်။
Posted by chityin htoo at 19:210comments
Labels: စာကြည့်တိုက်, ထူးဆန်းထွေလာ, ဗဟုသုတ
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် (796)
မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (481)
ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ (428)
ပို့ ဆောင်ရေး (353)
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံး (347)
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး (320)
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး (320)
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း (318)
ရထားပို့ ဆောင်ရေး (314)
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး (294)
Myanmar Customs (57)
ပြန်ကြားရေး ဖိုရမ် (16)
Myanmar VISA (10)
အမျိုးသားပြတိုက် (10) *
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန (9) *
အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၂) (9) *
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး (8) *
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ရုံး (၁) (8) *
Myanmar Evisa (7)
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (7) *
အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁) (7) *
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ရုံး (၂) (7) *
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (6) *
အမျိုးသား စာကြည့်တိုက် (6) *
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (6) *
မြန်မာနိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ် (6) *
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန (6) *
ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး (5) *
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန (5) *
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (5) *
မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်ဦးစီးဌာန (4) *
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး (4) *
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (3) *
HOTNEWS ဂျာနယ် (2228)
7 Day ဂျာနယ် (2171)
Eleven Media Group (1975)
စွယ်စုံ မီဒီယာ (1148)
Myanmar Journal Download (1094)
The Voice (1031)
မော်ဒန် သတင်းဂျာနယ် (1022)
The Yangon Times (959)
Popular Myanmar (929)
Mobile Guide (888)
Messenger News (873)
Myanmar Independent Journal (847)
Myanmar Times (824)
ဒီလှိုင်း ဂျာနယ် (722)
Express Times (682)
ပြည်သူ့ ခေတ် ဂျာနယ် (630)
The Myanmar Post (596)
Planet Media (582)
ရတီ စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်း (538)
My Suboo (514)
Today Media (492)
Yangon Media (486)
Do it Yourself Journal (480)
Focus Online Journal (469)
Venus News Weekly (460)
People Online (444)
ကုမုဒြာ ဂျာနယ် (414)
Faces Magazine (239)
Myanmar Express (3954)
Opposite Eyes (1986)
ကချင်နေ့ စဉ်သတင်း (1881)
Myanmar Local News (1234)
ယနေ့ မြန်မာ (780)
နေ့ သစ် (621)
Today Myanmar (8) *
မြန်မာ့ရောင်စဉ် (6) *
မြဝတီ (5) *
မြန်မာ့သွေး (4) *
ပြည်ချစ်သား (4) *
အမေ့အိမ် (3) *
မြန်မာ့သားကောင်း (2) *
7 Day Shopping (596)
Myanmar Online Sales (534)
City Mart (434)
O Myanmar (428)
Young investment group (341)
MM Biz Portal (285)
MCG Chigo (234)
Techno Park Group (226)
Myanmar Online Shopping Mall (209)
Bangkok Post (465)
Channel News Asia (334)
BBC English (301)
The Washington Post (277)
VOA English (271)
The Droid Guy (263)
World Street Journal (241)
Radio Free Asia (238)
Economic Times (232)
The Guardian (221)
NY Times (213)
Digital Trends (211)
The Straits Times (210)
Extreme Tech (195)
Work Com (888)
Myanmar Best Job (749)
Myanmar Job Search (596)
My Jobs (508)
Job for MM (364)
Ah Maet Eain (180)
Esearch Myanmar (77)
Myanmar Jobs DB (12)
သူရိယ သတင်း (760)
MWD Digital TV (566)
ရတနာပုံ WebPortal (494)
KBZ Bank (793)
CB Bank (496)
AGD Bank (465)
United Amara Bank (105)
MOB Bank (104)
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (21)
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် (555)
Elite Tech (501)
မြန်မာအိုင်အာစီနှင့် မြန်မာစကားဝိုင်း (423)
Tech Space Journal (408)
Myanmar ISP (361)
Mystery Zillion (349)
မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) (14)
Blue Navy Blog (13)
FM နှင့် ဖျော်ဖြေရေးဝဘ်ဆိုက်များ
Myanmar Songs (1055)
Burmese Classic (662)
All Channel Music (658)
All Channel Movies (604)
MM Life MP3 (588)
Myanmar Movie (495)
Shwe Videos (472)
Myanmar Online Music (455)
Myanmar MP3 (452)
Shwe Dream (433)
Burmese MTV (394)
Online Melody (338)
MM Music Online (326)
Flash Band (301)
Burmese Media (291)
ပတ္တမြား FM (270)
Shwe FM (259)
Poems Corner (68)
သဇင် ရေဒီယို (21)
Motors Com (1448)
Myanmar Cars Market (1080)
Diamond Auto (682)
Myanmar Used Car (647)
၀န်းရံခ Car Sale Center (568)
Myanmar Cars DB (524)
Best Auto (442)
Golden Dragon Trading (393)
Win Ko Trade (382)
MM Motor (359)
Delux Trading (350)
SNO Car Rental (310)
Vehicles Myanmar (296)
MV Tech (204)
Royal Naynantaw (157)
WYK Motors (144)
Myanmar AutoTrader (117)
Dyno Auto (75)
All Channel News (594)
Mandalay Gazette (552)
BBC Burmese (498)
Myanmar Training (447)
Myanmar Noble College (284)
Totel School (248)
Golden Crown Enginnering (215)
MM Care Forever (193)
YUDE Law Online Teaching (161)
Stream Line (122)
Good Health (776)
Wutyee Food House (525)
HIV information for Myanmar (408)
Asia Royal Medical (152)
Shwe Denti (150)
အောင်ရတနာ ဆေးရုံ (134)
Sun Far Travel and Tour (360)
7 Days Tour (315)
Air KBZ (259)
Exotic Myanmar Travel (245)
Air Mandalay (245)
Air Bagan (241)
MAI Air Line (235)
Green Palace Myanmar (233)
Adventure Myanmar (231)
Cheap Tickets Travel (221)
Thousand Islands (218)
Explore Myanmar (213)
Nature Link (209)
Yangon Airways (202)
Asian Wings Airways (127)
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း (6) *
Myanmar Football Federation (761)
Soccer Myanmar (666)
Arsenal Myanmar (467)
Myanmar Striker (462)
Live Score (438)
Myanmar Goal (433)
Myanmar National League (380)
KBZ FC (249)
Yangon United FC (169)
Yadanarbon FC (158)
Nay Pyi Daw FC (112)
Rakhine United FC (112)
Magway FC (104)
Southern Myanmar FC (98)
Manaw Myay FC (91)
ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ (1263)
MM Astrology (534)
MM Astro (317)
ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ (18)
Buddha FM (17)
မြောက်ဦးဆရာတော် အရှင်ဝါယာမိန္ဒ (12)
မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ အရှင်ဇ၀န (12)
ရွှေပါရမီ တောရ (11)
မဟာစည် ဆရာတော် (10)
Dhamma Web (8)
Dhamma Download (8)
Dhamma Online (8)
Lotus Foundation (6)
မဟာစည်ရိပ်သာ USA (6)
Sitagu Organizaion (5)
Myanmar Ebook (563)
Online Free Ebooks (310)
Free Computer Books (205)
Book Yards (175)
Free Ebooks Net (168)
Many Books (165)
Free Book Spot (155)
Snip Files (150)
MM ISP Ebooks (145)
Forever Space (139)
Get Free Ebooks (134)
Free Tech Books (134)
Ebook Lobby (134)
Know Free (126)
Online Programming Books (115)
Baen Free Library (115)
Ask Sam (98)
Memo Ware (93)
Myanmar Technology Gateway (328)
Web Host MM (242)
Shwe Hosting (225)
MM Web Pro (214)
Aero Tech MM (193)
iDeal Myanmar (188)
iBiz SP (164)
Myanmar Web Host (101)
Media Lane (94)
World Wide Myanmar (68)
Famous Facebook Pages
Aye Chan Mon (864)
Myanmar News Updates (712)
သက်တန့် ချို (636)
Myanmar Online News (424)
သတင်းချစ်သူ (ဝေဟင်) (17)
Myanmar Navy (16)
Ads Com (482)
AD Innwa (310)
iMyanmar Ads (59)
Wedding Ceremony ၀ဘ်ဆိုဒ်များ
Kokogyi Wedding (178)
Dictionary and Online စွယ်စုံကျမ်း
MM Dictionary (343)
Myanmar Network (296)
English Speak (238)
Thebest english4you (234)
Radio Australia (133)
MM Weather (81)
Yangon Directory (197)
Myanmar Explore (130)
Myanmar Business (99)
Mandalay Directory (89)
Myanmar World Info (85)
Myanmar Teldir (78)
Myanmar Info Tech (313)
Unitel Myanmar (198)
Mobile APP (193)
Mobile King (135)
HTC MM (66)
Mobile Topup (58)
Voip Myanmar (57)
Myanmar Housing (840)
Shwe Property (677)
Estate Myanmar (589)
Myanmar Bulletin Board (154)
House MM (107)
MM Property Ads (91)
Myanmar Online Store (145)
Yangon Online Store (120)
Prepaid Card Online Shopping (72)
Model Celebrity (160)
Info Myanmar Celebrity (146)
Myanmar Chitchat (139)
MEB Talk2 (85)
သက်မွန်မြင့် (10) *
မိုးဟေကို (9) *
ထက်ထက်မိုးဦး (7) *
နေတိုး (6) *
မေသက်ခိုင် (5) *
ဟိန်းဝေယံ (4) *
Shwe Money (82)
Myan Pay (49)
Drama Movies ၀ဘ်ဆိုဒ်များ
Drama Crazy (137)
Mandalay FM Live Radio နားထောင်ရန်
၀င်းဒိုးဆိုင်ရာအထွေထွေ (13) Android Application ဖန်တီးခြင်း (2) Android ဖုန်း အတွက် App (30) anti virus (12) Apple mobile (17) Embed Code for listen easy music radio (1) error repair (36) Facebook (3) Flash သီချင်းများ (5) for HTC (1) Gmail-Gtalk (3) inter songs (2) Mobile Guides ebooks (3) movie (4) NETWORKING TOOLS (1) Photoshop (39) Programming Tool (2) Root for moblies (4) Vedio editor (6) ကဗျာ (1) ကွန်ပျူတာ ebook (4) ကျန်းမာသုတ (36) င်း (1) စာကြည့်တိုက် (87) စားသေညက်စဂာ (1) ထူးဆန်းထွေလာ (6) နည်းပညာများ (39) ဗဟုသုတ (36) ဗုဒ္ဓဓမ္မစာအုပ်များ (4) ရသ (11) ကြယ်စင်များရဲ့လှုပ်ရှားမှု (3) သတင်း (12) သရဲအကြောင်း (1) သီချင်းများ (178) ဟာသ (1) အသုံးဝင်သော (6) အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုက်များ (7) အားကစားသတင်းများ (3) ဆော့ဝဲလ်များ (116) ဗေဒင် (3) ဗေဒင် ပညာများ (4) နိုင်ငံတကာအနုပညာသတင်း (9)
လူလိမ် – အားဝေ [ CD ]
01 Ma Chit Buu Ma Pyaw Nae\_’ 3.4Mb 01 Ma Chit Buu Ma Pyaw Nae\_’ 3.4Mb 03 A Chit Lo Khaw Tha Lar 4.8Mb 04 Hna Lone ...
တာတေ စာအုပ်များစုစည်းမှု့ (၁၃)အုပ် မှတ်ချက်။ ။ ည မဖတ်ရ။ (ဖတ်ပါက သင်အိပ်ပျော်မည်မဟုတ်ပါ။) စည်းကမ်း။ ။ အကယ်၍ဖတ်မိပါက ညဘက်တွင်တစ်ယောက်တည်းဖတ်ပ...
ကွန်ပျူတာ နှေးကွေးပါက မြန်ဆန်လာအောင်
၁။ Desktop ပေါ်ကMy ComputerကိုRight Clickလုပ်ပါ။ Propertiesကိုရွေးပါ။ ၂။ System Properties Box ကျလာလျှင် Advanced Tab ကို ရွေးပါ။ ၃...
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း – အာ…ဘွား (2013) [Album] Genre: Pop. File: 320kbps & 128kbps Mp3] ၀၁။ အာဘွား ၀၂။ နောက်ဆုံးအချစ် ၀၃။...
မြန်မာရှေးဘုရင်မင်းဆက်များ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●ပထမတကောင်းမင်းဆက်၊ ●ဒုတိယတကောင်းမင်းဆက်၊ ●သရေခေတ္တရာပထမမင်းဆက်၊ ●သရေခေတ္တရာဒုတိယမင်းဆက်၊ ●ပု...
အစိမ်းရောင်ရွာကလေး အစိမ်းရောင်ရွာကလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိချင်နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျွန်တော်ဖတ်မှတ်ပြီးသိသလောက် လမ်...
စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂၀၀၉) (ဂျူး) http://www.mediafire.com/ download.php?5xp4ca11zvxxbh p ဘ၀နှင့်စာပေ (မော်လမြိုင်) (ဂျူး) http://w...
ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး – ဇော်ဝမ်း
ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး – ဇော်ဝမ်း ၁ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး ၂ မမကိုယ်တိုင်က ၃ ရယူလိုသောဆု ၄ မိုးမင်းသင်္ကြန် ၅ နံ့သာရေဖျန်းကွယ် ၆ ဖြူပြာမ...
သီချင်းနဲ့ ပုံထည့်ပြီး Photo slide Show လုပ်ချင်ရင် (Proshow Producer)
သီချင်းနဲ့ ပုံထည့်ပြီး Photo slide Show လုပ်ချင်ရင် (Proshow Producer) ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ မေးထဲကနေ တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးအတွက် ...
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (၂၀၁၃)-ခုနှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ဟောစာတမ်းစာအုပ်များ
online read Download Pdf online read Download Pdf online read Download Pdf online read Download Pdf online read Dow...
<center><a href="http://www.aungsanmks.blogspot.com/" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 233px; height: 145px;" src="http://i.minus.com/ibzKGs07CjKUWB.png" /></a></center>
SI THU LWIN ONE MAN SHOW @ NATIONAL THEATER
Zin Entertainment Media
မေ့မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အလွမ်းတံခါးကို ထ ပိတ်...
Copyright © Easy Music Radio. ဒီဇိုင်း=အောင်အောင်(မကစ) - Easy Music Radio ဆိုဒ်လေးကို, 24-10-2012 ညနေ 5:20 တွင်, ၀တင်တည်ထောင်သည်။